Vaovao - Vita soa aman-tsara ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina
Vita soa aman-tsara ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina
Tamin'ny 27 septambra, ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sinanifarana tamim-pahombiazana. Ny kianja fanaovana fanatanjahantena Olaimpiana Xi'an dia nanolotra ny lanonana famaranana ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Niaraka tamin'ny gadon'ireo Lalao Nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Chinas, nilatsaka tsimoramora ny sainan'ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, ary novonoina tsikelikely ny fanilo lehibe nirehitra nandritra ny 13 andro.
ny Shandong delegasiona ny Lalao no laharana voalohany tamin'ny firenena tamin'ny medaly volamena 58 ary medaly 160 tamin'ny totaliny. Guangdong SY Zhejianglaharana faharoa sy fahatelo ary volamena 54 sy volamena 44 avy. Nandritra izay 13 andro lasa izay, atleta maherin'ny 12000 no nifaninana tamin'ny kianja filalaovana, nanokana hetsika ara-panatanjahantena mahafinaritra ho an'ny vahoaka ao amin'ny firenena, namela fotoana mahafinaritra tsy tambo isaina.
Nisy hetsika 140 tao amin'ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, ny 12 tamin'ireo dia nihoatra ny firaketana an'izao tontolo izao, ny 2 tamin'ireo dia ny firaketana aziatika, ary ny 24 tamin'izy ireo dia namaky firaketana nasionaly. Ohatra:Tompondakan'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 Shi Zhiyong SY Hou Zhihui, noho izany, nihoatra ny zava-bita eran-tany tamin'ny fifaninanana fanandratana lanja 49 kg an'ny lehilahy. "Trapeze aziatika" Su Bingtiannandrombaka ny medaly volamena tamin'ny famaranana 100m lahy ihany tamin'ny fotoana 9.95 segondra ary nametraka firaketana ny lalao Nasionaly vaovao. Ny fanahin'ireo atleta eo amin'ny sehatry ny asa mafy dia nanome aingam-panahy ny olona manerana ny firenena.
Ireo atleta dia miseho eny an-kianja, mihazakazaka amin'ny tenany, ary mihazakazaka mifaninana amin'ny firaketana. Ny fampisehoana tanjaka dia tsy afa-misaraka amin'ny fanazaran-tena mahazatra ary koa mila fitaovana fanatanjahan-tena ahazoana aina. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny fanatanjahantena eran-tany dia nisondrotra ihany koa ireo orinasa mifandraika amin'ny kiraro fanatanjahan-tena.Orinasa Jianer Shoesdia iray amin'izany. Jianer Shoes Company dia niorina tamin'ny 2006 taoJinjiang, Shina, ary manana traikefa amin'ny indostrialy 15 taona. Jianer dia misisika manome vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ny mpanjifa manerantany. Manohana i JianerBrand OEM SY fanamboarana ohatraserivisy. Efa misy mihoatra ny 5000 ny santionany ao amin'ny efitrano fampirantiana santionany Jianer, ary Jianer dia hanome vokatra vaovao mihoatra ny 500 isan-taona ho an'ny mpanjifa. Jianer Shoes Company dia mbola mitady mpiara-miasa bebe kokoa, tongasoa ireo mpiara-miasa vaovao hiara-hiasa.
Tapitra ny lalao nasionaly, saingy mbola tsy vita ny fanatanjahantena. Lalao amin'ny ririnina any Beijing 2022 hisokatra amin'ny volana febroary 2022, ka araho, ilay hetsika fanatanjahantena vaovao.
Fotoana fandefasana: Sep-28-2021